ဖားအောက်ရိပ်သာ တွင် ဘယ်လဂျီယမ် နိုင်ငံသား (၄၄)ဦး ကိုရီးယား(၃) ဦး တောင်အာဖရိက(၄)ဦး လာရောက် ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ. – GuGuGarGar
ဖားအောက်ရိပ်သာ တွင် ဘယ်လဂျီယမ် နိုင်ငံသား (၄၄)ဦး ကိုရီးယား(၃) ဦး တောင်အာဖရိက(၄)ဦး လာရောက် ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ.
Shwe | June 17, 2020 | Local News | No Comments
ဖားအောက် ရိပ်သာ တွင် ဘယ်လဂျီယမ် နိုင်ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောင် အာဖရိက(၄)ဦး လာရောက် ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ.
ဘယ်လဂျီယမ် နိုင်ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောင်အာဖရိက(၄)ဦး ဖားအောက်ရိပ်သာ တွင် လာရောက် ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ.
ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောင်အာဖရိက(၄)ဦး ဒီကနေ့လာရောက် ရဟန်း ခံတာတဲ့ ဗျာ. ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား (၄၄-ဦး) ကိုရီးယား(၃-ဦး) တောင်အာဖရိက(၄-ဦး) ဒီကနေ့ ဖားအောက်ရိပ်သာ မှာ လာရောက်ရ ဟန်းခံကြပြီး ကိုရီးယားသူ( ၅-ဦး) က (ရက် – ၉၀ ) တိတိ တရားအားထုတ် ဖို့ သီလရှင်ဝတ်ကြ ပါ တယ် ။
အနောက် ကမ္ဘာမှာတော့ ဘုရားရှင် ရဲ့ အဆုံးအမတွေ ကို ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ က ရာနှုန်းပြည့်နီး ပါး ယုံကြည်ကြပြီး အုံနဲ့ကျင်း နဲ့ အလုံးအရင်းနဲ့ ဘာသာပြောင်းတွေများလာ ခဲ့ပါတယ်။ အဓိက, ကတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး လက်တွေ့ တရားအားထုတ်တာပါပဲ။ တရားတော်တွေကို ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်စကား နဲ့ ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် ရှင်းလင်းပြောပြနိုင်မယ့် သံဃာ၊ သီလရှင်အရေအတွက် ကတော့ နည်းနေပါသေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် လည်း သိပ်ပြီးတော့ စိတ်မပူမိပါဘူးလေ..။ အချို့ အာဂန္တုပုံရိပ်များလည်း ပါဝင် ပါသည် ။ မိမိလည်း အဝါရောင်ဝတ်ဆင် ၍ သွား ခဲ့သည် ။ ဖားအောက်ရိပ်သာ ၌ နီညိုရင့်ရင့်သာ ဝတ်ဆင်ရပါသည် ။ .ဇဝန( သန်လျင် သီတဂူ ) Kyaw Zayya Yaw…။
ဖားအောကျ ရိပျသာ တှငျ ဘယျလဂြီယမျ နိုငျငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောငျ အာဖရိက(၄)ဦး လာရောကျ ရဟနျးခံတာတဲ့ဗြာ.
ဘယျလဂြီယမျနိုငျငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး တောငျအာဖရိက(၄)ဦး ဒီကနလေ့ာရောကျ ရဟနျး ခံတာတဲ့ ဗြာ. ဘယျလဂြီယမျနိုငျငံသား (၄၄-ဦး) ကိုရီးယား(၃-ဦး) တောငျအာဖရိက(၄-ဦး) ဒီကနေ့ ဖားအောကျရိပျသာ မှာ လာရောကျရ ဟနျးခံကွပွီး ကိုရီးယားသူ( ၅-ဦး) က (ရကျ – ၉၀ ) တိတိ တရားအားထုတျ ဖို့ သီလရှငျဝတျကွ ပါ တယျ ။
အနောကျ ကမ်ဘာမှာတော့ ဘုရားရှငျ ရဲ့ အဆုံးအမတှေ ကို ပညာတတျ အသိုငျးအဝိုငျးတှေ က ရာနှုနျးပွညျ့နီး ပါး ယုံကွညျကွပွီး အုံနဲ့ကငျြး နဲ့ အလုံးအရငျးနဲ့ ဘာသာပွောငျးတှမြေားလာ ခဲ့ပါတယျ။ အဓိက, ကတော့ မွနျမာပွညျကိုလာပွီး လကျတှေ့ တရားအားထုတျတာပါပဲ။ တရားတျောတှကေို ကမ်ဘာသုံး အင်ျဂလိပျစကား နဲ့ ကြှမျးကြှမျး ကငျြကငျြ ရှငျးလငျးပွောပွနိုငျမယျ့ သံဃာ၊ သီလရှငျအရအေတှကျ ကတော့ နညျးနပေါသေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ လညျး သိပျပွီးတော့ စိတျမပူမိပါဘူးလေ..။ အခြို့ အာဂန်တုပုံရိပျမြားလညျး ပါဝငျ ပါသညျ ။ မိမိလညျး အဝါရောငျဝတျဆငျ ၍ သှား ခဲ့သညျ ။ ဖားအောကျရိပျသာ ၌ နီညိုရငျ့ရငျ့သာ ဝတျဆငျရပါသညျ ။ .ဇဝန( သနျလငျြ သီတဂူ ) Kyaw Zayya Yaw…။
လမ်းဘေးကားပေါ်မှာတင် ယောက်ျား မသိအောင် နောက်မီးလင်းနေတဲ့ အမျိူးသမီးကို ယောက်ျားကိုယ်တိုင် မိတဲ့ ရုပ်သံ
BURMESE GHOULS WAS CHAMPION IN MOBILE LEGENDS PROFESSIONAL LEAGUE (MPL) SEASON 3